08-06-2008 01:23 AM #1
vmware ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း virtual machine ပေါ့ သူကတော့ ကြိုက်တဲ့ os ကိုတင်ပြီးစမ်းသပ်လို့ရတယ်လေ..သိပြီးသာပါ အခုပြောချင်တာက linx တင်ထားတဲ့ vmware တစ်ခုနဲ့ တကယ်ပင်မစက်နဲ့ဘယ်လိုချိတ်မလဲ ပြီးရင် အဲ့ဒီ vmware ကိုရောအခြားကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဘယ်လို ချိတ်မလဲ ... အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဗျ... စမ်းပြီးတော့ os တွေတော့တင်ပြီးသွားပါပြီ ပြီးရင် clinet ဘက်ကနေ စမ်းဖို့ အတွက် ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်လေ သိပြီးသားတွေဆိုရင်တော့ ဖောတာပေါ့ဗျာ.... vmware မှာos တင်ပြီးသုံးနေပြီးရင် အဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဖို့.. ... vmware ထဲကကွန်ပျူတာနဲ့ မူရင်းကွန်ပျူတာနဲ့ နှစ်လုံးထဲချိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ vmware ရဲ့ network card ကို VMnet 1 ရွေးလိုက်ပေ့ါ သူကတော့ host only ပေ့ါ .. ပြီးရင် မူရင်းကွန်ပျူတာမှာ VMware Network Adapter VMnet1 မှာ ip ကို vmware ထဲက ip နဲ့network တူအောင်ထည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ် ..... ဒါဆိုရင် မူရင်းကွန်ပျူတာထဲကနေ vmware ထဲက ကွန်ပျူတာကို ping လို့ရပါပြီ... တကယ်လို့ အပြင် ကကွန်ပျူတာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Edit ထဲက virtual network setting မှာ Host virtual Mpping ဆိုတဲ့ tab မှာ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ..VMnet0: မှာ မိမိရဲ့network card ကိုရွေးလိုက်ပါ... ပြီးရင် vmware ရဲ့ network card ကို vmnet0 ရွေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ.... ပြီးရင် မူရင်းကွန်ပျူတာမှာ ip ထည့်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် အပြင်ကနေလည်းအဲ့ဒီ vmware ကွန်ပျူတာကို လှမ်းping လို့ရပြီပေါ့...........ဒါဆို vmware ထဲက နေ linux server တွေထောင်ပြီး မူရင်းကွန်ပျူတာ နောက်ထက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ computer တွေကနေ လှမ်းပြီး user တစ်ယောက်အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့.........
........................................နောက်ထက်ပြောပြချင်တာက window မှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Remote ၀င်မယ်ဆိုရင် telnet နဲ့ဝင်ရတယ်.. linux မှာ က Remote ၀င်မယ်ဆိုရင် SSH ကနေ၀င်ရတာ....SSH ကိုကျတော့ window ကနေအသုံးပြုလို့မရတဲ့အတွက် putty software ကိုအသုံးပြုပြီးဝင်လို့ရပါတယ်... linux က အဓိက မည်းမည်း screenကြီးမှာ ဟိုရိုက်ဒီရိုက်လုပ်ဖို့အတွက် က အဲ့ဒီ software လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်.... SSH ကport 22 ပါ....ပြီးတော့ VMware ပေါ်မှာလုပ်ရင် နဲနဲ အလုပရှုပ်နေပါတယ်.....mouse ကိုဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့မလို့ပါ RAM နဲရင်ပိုဆိုးပါတယ်...ဒါကြောင့် putty လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ် ဘာမှ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး.... သိပြီးသားတွေဆိုရင်တော့ ကျွန်တေ်ာက ကိုကိုဖောပေါ့ဗျာ...........putty လိုချင်ရင်တော့... ဒီမှာရှိတယ်နော်.......... server တွေကိုဝင်တာတို့ router တွေကိုဝင်တာတို့ အဲ့ဒီ software လေးကအသုံးဝင်ပြီး server တွေကို ခဏစမ်းသပ်လေ့လာဖို့အတွက် VMwere ကအသုံးဝင်ပါတယ.............
The Following5Users Say Thank You to kolynn86 For This Useful Post:
iPod, onlinesecurityrat, phoelapyae, sanda87, usser
08-18-2008 12:17 AM #2
ဟုတ် linux ကိုလည်း microsoft ကနေပြီး telnet နဲ့ဝင်လုိ့ရပါတယ် ။။။။။ linux ကနေပြီး microsoft ကိုဝင်ချင်ရင် ရင် linux မှာ remote desktop ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ် ။။။။။ command ရိုက်ပြီး run ကတာပါ ။။။။။ ဒါပေမယ့် linux မှာတော့ GUI နဲ့ ၀င်မှ ရတာပါ ။။။။ SSH က ရပါတယ်
The Following User Says Thank You to Cyberhack For This Useful Post:
08-18-2008 12:38 AM #3
ပြန်စာ -> VMware software နဲ့ putty software အကြောင်း...
Putty လိုပဲ အစ်ကိုသိတဲ့နောက်ထပ် Software လေးတစ်ခု ရှိသေးတယ်...။
Secure CRT တဲ့ ....။သူလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်....။နောက်မှဘဲ link ပေးမယ်နော်...။
10-02-2008 05:53 PM #4
ငါကတော့　Teraterm-Pro with SSH ကိုသုံးတာများတယ်။
Unix , Linux မှာတော့　Server Side Program &amp; DB　Code ဘဲရေးတာများတာ။
CUI　နဲအဆင်ချောနေတာနဲ　GUIမသုံးဖြစ်ဘူး။
အခုတလေား　GNUကနေ　OpenSoftတွေတော်တော်များလာတာနဲ　Linux ကိုလည်းGUIသုံးသူတွေများလာဆိုဘဲ။
11-12-2008 10:20 AM #5
ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> VMware software နဲ့ putty software အကြောင်း...
[quote author=ကိုထွဋ် link=topic=825.msg4596#msg4596 date=1218996505]
09-05-2009 10:45 AM #6
09-05-2009 12:01 PM #7
မူရင်းပို့မှာ ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးထားပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ
08-11-2010 12:45 PM #8
3/3 Thamine Junction , Mayangone T/S .
Re: VMware software နဲ့ putty software အကြောင်း...
ဟဲဟဲ ... ကိုဖန်ဆင်းရှင်ရေ နောက် တစ်ခေါက်လောက် .... မျှပါဦးဗျ ...
08-13-2010 10:44 PM #9
[quote author=ချစ်သားငယ်လေး link=topic=825.msg60761#msg60761 date=1281507305]
12-18-2010 05:33 PM #10
ဘယ်လင့်မရတာလဲတော့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ လင့်အကုန်ပြန်စစ်ပြီး အကုန်ထပ်ဖြည့်ထားပေးပါပြီး။